Chalet "Bragalou" e Gryon
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguChristine & Serge
Umhambi othandekayo-uBragalou ufumana ulusu olutsha :-) - Umsebenzi wokuhlaziya uya kuhamba kude kube nguDisemba 2020.
IChalet "Bragalou" ime kumbindi welali entle nenomtsalane yaseGryon. Yakhiwe ngo-1721 kwaye yahlaziywa kwiinkulungwane nakwiminyaka yakutshanje, ihlala iyi-chalet yokwenyani kunye ne-rustic.
Ungena kwi-chalet ngekhitshi elilula kodwa elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nesitovu seenkuni (onke amagumbi anokufudumala okuphakathi), igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elincinane / elipholileyo kunye negumbi lokufunda elinebalcony kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho ophantsi. Izinyuko ezivela kwigumbi lokutyela ziya kukukhokelela kumagumbi amabini okunxibelelana, ibalcony yesibini kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
I-Bragalou i-200m kuphela ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseGryon kwaye ebusika nasehlotyeni, i-"ski" -ibhasi ekhuphuka i-Barbeleuse cablecar ishiya i-"la Maison du Terroir", i-50 m ukusuka kwi-chalet.
Kumzuzu omnye okanye emibini umgama wokuhamba, uya kufumana nevenkile enkulu yalapha ekhaya, ibhula, ivenkile yobisi eneemveliso zengingqi kunye neeresityu ezilungileyo ezi-2 kunye nekhefi, iyenza ilunge ngakumbi nakubantu abahamba ngezithuthi zikawonke-wonke. Amathafa amabini e-BBQs kunye nokonwabela ubomi basezilalini kunye nepanorama emangalisayo kunye negadi yemifuno (kungekhona ebusika) kwiisaladi zakho kunye nendalo yokutya.
Kumgangatho ophantsi, kwigumbi lokuhlamba ungagcina kwakhona i-ski yakho - iibhayisikili zeentaba okanye ezinye izixhobo zemidlalo.
Ibekwe kwindawo esembindini kwaye ikufutshane nayo yonke into-imizuzu emithathu uhambe uye emasimini, emaplangeni nakwindalo!
Umbuki zindwendwe ngu- Christine & Serge
Passionate travelers, wind- and kite-surfers, and initially sailors. We fell in love with NE Brasil, it's people, nature and winds many years ago - and Atins is the Queen !
Ndiza kuba seGryon ixesha elininzi lokuphela kweveki kwaye ndifikeleleka ngefowuni nangaliphi na ixesha lokuhlala kwakho.
UChristine & Serge yi-Superhost
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1084
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gryon